अक्सफोर्डले बनाएको कोरोनाको खो´प नेपाल आइपुग्दा कति रुपैयाँ पर्ला ? – Butwal Sandesh
अक्सफोर्डले बनाएको कोरोनाको खो´प नेपाल आइपुग्दा कति रुपैयाँ पर्ला ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको म*हाव्यादीको लडाइमा सम्पूर्ण विश्व केन्द्रित छ । यहि बेलामा यस विरुद्धको खो,प परिक्षणमा सफलता पायो भने कोरोनासँग प्रतिस्पर्धामा अर्को कुनै पनि उत्पादन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट एउटा शुभ समाचार आएको छ । यस खो*पमा मानव परीक्षण चलिरहेको छ र परीक्षणमा राम्रो परिणामहरू बाहिर आएको छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय खो*प भारतमा पनि उत्पादन गरिने छ । कोभिड म*हामारीको बेला खो*प बनाउनु विश्वमा यसको आपूर्ति गर्नु ठूलो चु*नौती हुनेछ ।अमेरिका र चीनमा पनि पनि मानव परिक्षणको काम भइरहेको छ अक्सफोर्ड भ्यासीन समूहका निर्देशक एन्ड्र्यू जे पोलार्डले भने । उनले भने, “हामी यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा होइन तर सामूहिक प्रयासको रूपमा देख्छौं ।
यसको मूल्यलाई अहिलेको विश्वले नाफाभन्दा पनि मानवीय संवेदनशिलतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आवज उठिरहेको छ । त्यस्सैले सुरुमा यसमा कुनै नाफा लिइने छैन । उनले भने, “भारतमा यसको मूल्य १००० रुपैयाँ भारु वा कम हुन सक्दछ । म*हामारीबाट अ*क्रान्त भइरहेका बेलामा खोपको लागि माग धेरै बढी हुनेछ ।